အကောင်းဆုံးဖောင်ဒေးရှင်းအခမဲ့ကွန်ကရစ်သုတ်စက်ရုံထုတ်လုပ်သူနှင့်စက်ရုံ |Macpex
အုတ်မြစ်မရှိသော ကွန်ကရစ်ရောစပ်စက်ရုံ၏ စက်ကိရိယာများသည် Standard ရောစပ်စက်ရုံ၏ အခြေခံဘောင်ကို ပြောင်းလဲပါသည်။ဖရိန်က ပိုထူပြီး ပိုတာရှည်ခံပါတယ်။
1. အခြေခံအုတ်မြစ်အခမဲ့ရောစပ်စက်ရုံ၏ batching စနစ်၏ဘောင်ဖွဲ့စည်းပုံသည်စက်ပစ္စည်း၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဧရိယာကိုတိုးစေသည်။
2. ရောစပ်ယူနစ်နှင့် တိုင်းတာခြင်းယူနစ်သည် မူလီများဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ဖရိန်ဖွဲ့စည်းပုံကို ခံယူပြီး လမ်းလျှောက်ပလပ်ဖောင်းကို ပတ္တာဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလအတွင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနေရာလွတ်ကို လျှော့ချရန် ပတ္တာအမှတ်တစ်လျှောက် ခေါက်နိုင်သည်။
3. လျှပ်စစ်စနစ်သည် စက်ပစ္စည်းများ၏ တပ်ဆင်မှုလည်ပတ်မှုကို လျှော့ချပေးသည့် အမြန်ပလပ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာပုံစံကို လက်ခံသည်။
4. ဆိုက်၏အရွယ်အစားအရ၊ ဇစ်ဇတ်နှင့် L-ပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ် ပြုလုပ်နိုင်သည့် ပိုမိုသင့်လျော်သော ရောစပ်စက်ရုံကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
5. ၎င်းသည် အခြေခံအချိန်ကို များစွာသက်သာစေပြီး တပ်ဆင်ရန် ပိုမိုအဆင်ပြေသည်။
6. အခြေခံအုတ်မြစ်ကင်းစင်သော ရောစပ်စခန်းသည် ပရောဂျက်ဘူတာရုံကို အမြန်ဆောက်လုပ်ရန် လိုအပ်သောကြောင့် ၎င်းအား တည်ဆောက်ရေးကာလ ပြီးဆုံးချိန်တွင် နောက်ဆောက်လုပ်ရေးနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားမည်ဖြစ်သည်။ဘိလပ်မြေ silo အတွက်၊ နောက်ပိုင်းတွင် ရွေ့လျားမှု အဆင်ပြေစေရန် အလျားလိုက် ဘိလပ်မြေ silo ကို အသုံးပြုရန် ယေဘုယျအားဖြင့် အကြံပြုထားသည်။
အခြေခံအုတ်မြစ် အခမဲ့ ကွန်ကရစ်ရောစပ်စက်ရုံသည် ရိုးရှင်းသော တပ်ဆင်မှုဖြင့် ကွန်ကရစ်ရောစပ်စက်ရုံ အမျိုးအစားသစ်ဖြစ်ပြီး ဘိလပ်မြေဖောင်ဒေးရှင်းကို တည်ဆောက်ရန် မလိုအပ်ဘဲ အသုံးပြုသူအချို့၏ လိုအပ်ချက်နှင့် အကြံပြုချက်အပေါ် အခြေခံ၍ အဆင်ပြေပြေ ဖြုတ်တပ်ခြင်းနှင့် နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းတို့ကို အခြေခံထားသည်။
အခြေခံအုတ်မြစ်အခမဲ့ရောစပ်စက်ရုံသည် အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်စနစ်၊ ပစ္စည်းသိုလှောင်မှုစနစ်၊ မီတာတိုင်းတာမှုစနစ်၊ ကွန်ကရစ်ဖော်စပ်ခြင်းစနစ်နှင့် ရောစပ်ခြင်းစနစ်တို့အပါအဝင် စနစ်ငါးခုပါရှိသည်။ဖောင်ဒေးရှင်း အခမဲ့ ရောစပ်စခန်း အသစ်ကို တည်ဆောက်ရန် ပုံစံ နှစ်မျိုး ရှိသည်- ကွန်တိန်နာ အမျိုးအစား ဖောင်ဒေးရှင်း ကင်းစင်သော ရောစပ်စခန်း နှင့် သံမဏိ တည်ဆောက်ပုံ အခြေခံ အုတ်မြစ် အခမဲ့ ရောစပ်သည့် ဘူတာ ဖြစ်သည်။
အခြေခံအုတ်မြစ်အခမဲ့ ကွန်ကရစ်ရောစပ်စက်ရုံသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ မြန်ဆန်စွာတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ရွှေ့ပြောင်းရလွယ်ကူခြင်းတို့အတွက် အဆင်ပြေသည်။အမျိုးမျိုးသော ရေအားလျှပ်စစ်၊ အဝေးပြေးလမ်း၊ ဆိပ်ကမ်း၊ လေဆိပ်၊ တံတားနှင့် အခြားသော ဆောက်လုပ်ရေးပရောဂျက်များအတွက် ကွန်ကရစ်ရောစပ်ပေးဝေခြင်းအပြင် လုပ်ငန်းသုံး ကွန်ကရစ်ရောစပ်စခန်းများ ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ပါသည်။
ဖောင်ဒေးရှင်း အခမဲ့ ရောစပ်ထားသော အပင်သည် ဖောင်ဒေးရှင်း အချိန်ကို များစွာ သက်သာစေပါသည်။ဖောင်ဒေးရှင်းကို မဖွဲ့တာမဟုတ်ပေမယ့် အခြေခံအုတ်မြစ်က ပိုတိမ်ပြီး မာကျောတယ်။ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက် အချိန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များစွာကိုလည်း သက်သာစေပါသည်။နောက်ပိုင်းအဆင့်တွင် site ကိုရွှေ့ရန်လည်းပိုမိုအဆင်ပြေသည်။
အခမဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းရောစပ်စက်ရုံ 90 ၏စျေးနှုန်းကိုနောက်ဆုံးဖွဲ့စည်းပုံအရဆုံးဖြတ်ရမည်။
ယခင်- တရုတ်စံတော်ချိန် HZS50 ကွန်ကရစ်လုတ်ကျင်းစက်ရုံ
Bolted ဘိလပ်မြေ silo